Gigi Xadiid | July 2022
Gigi Hadid Braless at 'Vogue for Gigi' ee NYC
Layaab leh had iyo jeer, Gigi Hadid muuqaal la'aan bilaa geesinimo ah ayaa jiiday dareenka paparazzi iyo wariyeyaasha ka socda Ameerika! Waxay ka qayb gashay dhacdadii ‘Vogue for Gigi’ ee ka dhacday magaalada New York, waxay soo xidhatay suud liin ah iyo jaakad isku midab ah, xitaa indhaheeda indhuhu waxay ahaayeen oranji! Gigi aad ayey u qurux badan tahay, sida walaasheed Bella Hadid! Booqo Gigi Xadiid timaheeda qaawan ...
Gigi Hadid Kafiiri Kalandarka Pirelli 2019
Fiiri Gigi Hadid arag iyada iyo sawiro galmo ah oo ay u sameysay Kalandarka Pirelli oo loogu magac daray 'Riyoonaya' oo uu qoray Albert Watson! Naqshadeynta timo cad oo qurux badan Gigi waxay soo bandhigtay nus qaawan, lebbiska dharka kulul, kafiiri dharka rajabeeto iyo dharka satin! Waxay iga dhigeysaa mid geesi ah tan iyo markii ugu horreysay ee aan aragno tigaheeda, halka ay sibiibixeyso Versace Fashion Show! ...
Gigi Hadid Boobs In Aragto Dharka
Eeg boogaha Gigi Hadid ee arag sawirrada dharka halkan ku yaal Mostra Musa. Sawirro qaas ah oo ah naasaha Gigi Xadiid ** 100% BILAASH ** BOOQO HADA **
Gigi Hadid Nip Slip oo ku saabsan barnaamijka 'Versace Show' ee magaalada Milano
Halkan ka eeg UNCENSORED Gigi Hadid nip sllip on Versace Show in Milan halkan oo ku yaal Mostra Musa! KALIYA ** 100% BILAASH ** BOOQO HADA **
Gigi Hadid Pokies Ayaa Lagu Arkay Magaalada New York
Gigi Hadid pokies waxaa lagu arkaa fagaare, iyadoo ka baxeysa aqalkeeda ku yaal magaalada New York! Qaabka quruxda badan ee Gigi waxay xidhnayd dusha sare ee buluugga ah iyada oo aan lahayn rajabeeto, surwaal jiinis ah oo saraysa iyadaana si dhaba u ifaysa! Paparazzi waxay qabatay daqiiqadan ibta naaska iyada oo xiiqaysa sida aynaan u arkin, markaa hadda waxay gaadhay illaa ...
Gigi Hadid Oo Soo Bandhigtay Arimaheeda Aan Xiirayn Ee Jacaylka Imaatinka 2017 (Maalinta 11)
OMG! Fiiri kilkilooyinka aan la xiiran ee caanka ah ee caanka ah ee caanka ah Gigi Hadid! Jacaylka Advent wuxuu ku riixayaa xuquuqda haweenka xadka iyadoo kor u qaadeysa dhaqankan foosha xun ee ku kora dhirta kilkilaha! Ma taageeri karno joornaalka jaceyl markan, laakiin Gigi wali wuxuu umuuqdaa mid qumman oo wasmada leh, waxaan jeclaan lahaa dhididkeeda oo dhan ...
Gigi Hadid Oo Geesinimo Ka Muujiyay Todobaadkii Fashion-ka Paris
Gigi waa mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan, waa Victoria’s Secret angel iyo gabar waji macaan leh oo had iyo jeer hareeraha la joogta walaasheed Bella Hadid iyo saaxiibka ugu dhow Kendall Jenner. Xitaa iyada oo kaliya 22, tiradeedu waxay noqotay mid caan ah, waxaan u maleynayaa in qof walbaa ogyahay cidda Gigi tahay! Waxay ku muujisay buubbadeeda sawir qaadista loogu talagalay ...
Gigi Hadid wuxuu Qariyey Sawir Qaawan Photo Shoot allure Magazine
Fiiri Gigi Hadid sawir qaawan oo sawir qaawan loogu talagalay sawirada Allure Magazine halkan ku yaal Mostra Musa. Gigi Hadid sexy ** BOOQO Hada **
Gigi Hadid Oo Jidhkiisu Cad yahay Iyo Jeansada La Jarjaray
Halkan ka daawo Gigi Hadid oo ku jira dharka cad iyo jiiniska sawirada halkan ku yaal Mostra Musa. Gigi Hadid Qurux Badan ** BOOQO Hada **
sawiro qaawan oo ah janet jackson
guduudan qaawan johansson
Serena Williams xaday xiisaha